kwan dai thet thi: 2010
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 21:14 Ingen kommentarer:
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 20:54 Ingen kommentarer:
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 20:41
ချစ်သူသျှေနှစ်ယောက်၊ ဘ၀တခုနန့် ကဗျာသျှေတပုဒ်
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 00:29 Ingen kommentarer:
ချစ်ဂတိ မပျက်စီတမ်းနန်း… ချစ်သူ….။
နောက်ဆုံးလူ ဖြစ်ရဂေ ကျီယာ….။
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 00:17 Ingen kommentarer:
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 00:08 Ingen kommentarer:
ချစ်သူ.... သာဓု ခေါ်နိုင်ဇီ...
အပြုံးနန့် ကမ်းခရေ လက်ကို
ကို့မာ အားမဟိပါ ချစ်သူ….။
ကို့ဘ၀ကို တောက်ပနိုင်ဖို့ မထင်
ရသေ့ ဘ၀နန့်တော့ မဟုတ်ပါ ချစ်သူ….။
ချစ်သူ သာဓု ခေါ်နိုင်ဇီ….။
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 10:03 Ingen kommentarer:
၂၂၅ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားနန့် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ဓါတ်ပုံတိ
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ တတိယအကြိမ်ညီလာခံ ကိုယ်စလှယ်တိ အမှတ်တရ
၂၂၅ နှစ်မြောက် အဖရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော် ကျဆုံးနိန့်အခမ်းအနား (နော်ဝေး)
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 09:36 Ingen kommentarer:
၂၂၅ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားနန့် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ေ...